Date My Pet » Fomba dimy Get Back ny Ex.
Last nohavaozina: Oct. 29 2020 | 3 min namaky
Noho izany dia tsy mandeha tsara? Nandray azy ho toy ny fanomezana? Tsy naneho fahalianana ampy izay ao anatin'ireo fahasahiranana sy ny zavatra ilain'ireo ny fifandraisanareo? Very ny fitiavana eo amin'ny fiainanao ary te azy niverina? Dia mandeha ho sarotra lalana mba hiverina ao an-matoky fa tsy ho very maina izany. Rehefa dinihina dia tsy izay zavatra rehetra misy ankehitriny no mahafeno andro ny fitiavana ny fiainany ary tena hanimba ny fihetseham-pony. Ny lisitra lava be ny olona mandeha haingana-mampiaraka, sns … dia ampy mba hampisehoana fa ny zavatra hita ihany io lehilahy io dia tsy fahita firy. Fa dia hahalalany izay rehetra vonona rehetra ary mahatsiaro ho downright mahatsiravina izao ankehitriny izao, satria tsy afaka mihazona azy ao amin'ny fitaovam-piadiana, na miresaka aminy. Fa tsy very rehetra. Afaka miezaka, fara fahakeliny, ny sarotra mba hahazo azy ireo, ary ny fanampoizana dia hoe raha nisy ny fitiavana mafy any dia mbola ho eo koa eo amin'ny lafiny. Rehetra tokony ho atao dia ny dininy izany toy ny izy ireo no miezaka mba hahatonga anao sy miezaka ny sarotra ny mampiseho azy ireo ny zavatra tena dikan'ny hoe anao. Ireto misy fomba vitsivitsy fotsiny izay azonao atao fa ry zalahy sy gals!
1. Hazavao ny antony nitondran'izy ireo ny fomba ve
Izy dia angamba sahiran-tsaina ny amin'ny antony nitondra azy ho toy ny fanomezana na nitondran'izy ireo ny ratsy. Tsy voatery midika hoe mila mamorona tantara be pitsiny ny sasany momba ny antony nataonao. Izany dia midika hoe ho marin-toetra. Mety ho ianao mbola tanora, tsy tonga saina izay nanana mandra-na dia lasa maro ny antony. Tsy misy tonga lafatra, ary raha tena tia ianao dia ho tia anao noho ny zavatra rehetra izy ireo mankahala ny momba anao koa. Fa matetika ny serasera dia sakana lehibe eo amin'ny fifandraisana. Mila mahatakatra ny antony nanao izay nataony. Tokony hankasitraka azy ianao fa izy dia hankasitraka ny marina sy ny hoe herim-po ianao, ary matotra ampy ny miaiky fa diso.
2. Aza miala amin'ny Contact Azy Ireo
Mazava ho azy fa izany dia sarotra iray, satria mety tsy te-hijanona any hifandray aminao. Ary tsy maintsy hanaja izany. Fa fotsiny raha mahita azy ireo hoe manahoana sy teny vitsivitsy. Asehoy izay tsy nanadino azy ireo. Asehoy azy ireo fa miahy anao sy izay te-hiaraka aminy fa fa manaja fa ny baolina eny an-kianja amin'izao fotoana izao.
3. Lazao azy ireo miala tsiny ianao
Toa fa tsotra nefa matetika no zavatra sarotra indrindra eto amin'izao tontolo izao ny olona iray hanao. Amin'ny lafiny iray hafa dia misy olona milaza azy io matetika loatra. Mila hahaizanao mandanjalanja eto. Ilainy ny ho avy amin'ny fo sy tso-po. Mila mampiseho azy fa tena manenina noho ny zavatra izay efa nataonao ho azy ireo. Fa mandratra izy ireo. Ary ilaina ny porofo ho azy ireo fa nanenina izany ary ny zavatra ho hafa raha hitondra anao indray amin'ity indray mitoraka ity. Tsy azo avela ho banga fotsiny teny. Ho hitan'izy alalanao niaraka.
4. Asehoy amin'izy ireo fa Efa Niova
Tsy midika akory izany ho toy ny olona, ​​satria mazava ho azy fa hisy tsy misy dikany amin'izany. Dia iza ianareo dia tahaka ny olona izay nanao azy ho tia an'i anareo amin'ny toerana voalohany rahateo. Midika izany fa hita ho azy fa efa niova ny tany ireo lafiny ratsy izay nitondra anao na mitokana eo amin'ny toerana voalohany. Mila mampiseho azy ireo fa afaka mahita izay tsy nety ankehitriny sy ny nianaranao tao izany.
5. Hiady ho Azy
Ny iray amin'ireo tantaram-pitiavana indrindra ny zavatra azonao atao no hiady ho anao ny olona tia. Ianao ihany no hiady ho olona iray tia rahateo ka manohitra ny tahaka na raitra. Sy niady ho azy ireo ianao, ary mampiseho azy ireo fa izy ireo dia rehetra-dehibe ho anao izao ianao naneho marimarina hatraiza ny fitiavanao azy ireo. Aoka ho marin-toetra amin'izy ireo. Mahatsapa toy ny ampahany goavana amin'ny fiainanao dia tsy hita ary tsy hay refesina ianao ka mijaly. Aoka ianao ho vonona ny hametraka ny tenanao eo amin'ny tsipika, ary aoka tsy ny fiavonavonana haka an-dalana. Tsy misy olona maniry ho lasa manirery ny mirehareha amin'ny mahay mandanjalanja.